Maalinta: 17 November 2019
Yenikapi Haciosman Metro Times Stations iyo Route
Yenikapı Hacıosman Metro Stations iyo Route: Marxaladda koowaad ee khadka u dhexeeya Yenikapı iyo Hacıosman, dhismaha kaas oo ka bilaabmay 1992, ayaa la geliyey adeegga 16 Sebtember 2000. Maalin kasta, celcelis ahaan [More ...]
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç wuxuu ku daray adeeg muhiim ah dadaalada lagu doonayo in Kayseri laga dhigo magaalo dalxiis dhinac kasta. Natiijadii ka soo baxday shaqada adag ee Madaxweyne Büyükkılıç, dalxiiska buufinta ayaa ka bilaabmay gobolka Soğanlı iyo [More ...]
Saacadaha Konya Tram: Waxaan kuu abuurnay Nidaamka Tareenka Isku-xirka ee Konya iyo Khariidada Gaadiidka adoo sameynay daraasad faahfaahsan oo ku saabsan Nidaamka Tareenka Konya iyo Khariidada Gaadiidka. line taraamka Konya, tramway magaalada Turkey ee Konya [More ...]
Mashaariicda Raaxada Gaadiidka ee Kocaeli Ayaa Noloshu Noqota; Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadaa inay isgoysyada iyo laamiga dhigto wadooyinka si ay muwaadiniinta ku nool gobolka ay ugu safraan si raaxo leh. this [More ...]
Shiinaha ayaa saxeexday heshiiskii iskaashiga waddooyinka ee 137 Wadada 197
Dowladda Shiinaha waxay sii wadaa inay kordhiso ganacsiga ay la gasho dalalkii qaatay hirgelinta Mashruuca Wadada "Belt Road". Maamulka Shiinaha ayaa la saxeexday heshiis iskaashi oo jiil ah oo loo yaqaan 'X GenX' Generation Road oo ay la leeyihiin waddanka 30 ee ururka caalamiga ah ee 137 intii lagu jiray Oktoobar. Shiinaha [More ...]
Wasiirka Turhan wuxuu baaray howlaha wadooyinka ee Bingöl
Wasiirka Turhan Bingöl ayaa baaray howlaha wadooyinka-goobta; Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, oo u yimid Bingöl si uu ula xiriiro, waxaa ku weheliyey gudoomiye ku xigeenka AK Party Cevdet Yılmaz iyo Bingöl oo u aaday Erzincan [More ...]
Khadadka Tareenka ee Kars Edirne wuxuu noqon doonaa mid kamid ah Wadooyinka Muhiimka ah ee Jiilaalka
Khadadka Tareenka ee Kars Edirne wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee Wadada Abuurka; Generations in Turkey ayaa dalab wadada "Central Corridor" ayaa bilaabay in ay hadal hab dheeraad ah oo la taaban karo. Saxaafadda Shiinaha "Baku Tbilisi waxaa lagu dhex daray khadka Kars [More ...]
Tareenka buluuga ah ee Izmir, Tareenka Central Central Anatolia, East Express, South Express, Lake Van Express, Konya Blue Train iyo Cukurova [More ...]
Saacadaha Tareenka ee Kadıköy Tavşantepe: 1 ee khadka. marxaladda ayaa lagu dhammeeyay 2012 waxaana loo furay adeegga iyadoo la adeegsanayo saldhigga 21,7 qeybta 16 km qeybta u dhaxaysa Kadıköy iyo Kartal. Yakacık-Adnan Kahveci, Pendik iyo Tavşantepe [More ...]
Maanta Taariikhda: 17 November 1871 Baron Hirsch World
Maanta taariikhda 17 November 1871 Baron Hirsch waxay ugu deeqday 1 malaayiin Faransiis ah oo loogu talagalay Ururka Yuhuudda Adduunku